သင့္ဘ၀ကို တိုးတက္ေစႏိုင္ေသာ ဝက္ဗ္ဆိုဒ္ ေပါင္း ၂၅ ခု - အပိုင္း (၁) - Myanmar Network
Posted by Betty on January 8, 2016 at 10:43 in သုတ/ရသ ေဆာင္းပါးမ်ား
သင့္ဘ၀ကို တိုးတက္ေစႏိုင္ေသာ ဝက္ဗ္ဆိုဒ္ ေပါင္း ၂၅ ခု - အပိုင္း (၂)
သင့်ရဲ့အချိန်တော်တော်များများကို လူမှုမီဒီယာတွေကိုသုံးရင်း ကုန်ဆုံးနေမိပါသလား။ သင့်ရဲ့ အင်တာနက် အသုံးပြုမှုတွေက ဖြုန်းတီးတာမျိုးတွေဖြစ်နေပါသလား။ လူမှုမီဒီယာတွေဟာ အသုံးပြုနေစဉ်အတွင်းမှာ အချိန်ကုန်လို့ ကုန်မှန်းမသိအောင် စွဲလန်းစိတ်ကိုဖြစ်စေပါတယ်။
အခြားတစ်ဖက်မှာတော့ လူမှုမီဒီယာတွေဟာ ဆွေးနွေးခန်းတွေ၊ သတင်း အရင်းအမြစ်တွေ၊ အတွေးအခေါ်အသစ်တွေရှိနေတဲ့အတွက် မိမိဘဝအတွက် လိုအပ်တဲ့တွန်းအားတွေဖြစ်တဲ့ သင်ယူမှုတွေကိုလည်း ပေးနိုင်ပါတယ်။
လူမှုမီဒီယာရဲ့ အန္တရာယ်ဖြစ်စေလောက်အောင် စွဲလန်းစေတတ်တဲ့ ထောင်ချောက်တွေကနေ လွတ်မြောက်ပြီး ဗဟုသုတတွေ၊ ပျော်ရွှင်တိုးတက်မှုတွေနဲ့ ပြည့်နေတဲ့ ဘဝကိုလိုချင်တယ်ဆိုရင်ဖြင့် အောက်မှာ ဖော်ပြပေးမယ့် ဝက်ဗ်ဆိုဒ် ၂၅ ခု ကို ဝင်ရောက် လေ့လာကြည့်လိုက်ပါ။
အွန်လိုင်း သင်ခန်းစာတွေ အများအပြားပါဝင်တဲ့ website တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ ရာပေါင်းများစွာသော တက္ကသိုလ်တွေနဲ့ နာမည်ကြီးပါမောက္ခတွေမှ ပို့ချတဲ့ သင်ခန်းစာတွေ အများအပြားပါဝင်ပါတယ်။ သင်ဝါသနာပါမယ်ဆိုရင် သမိုင်းပညာကနေ ကွန်ပျူတာ ပရိုဂရမ်ရေးဆွဲတဲ့ ပညာအထိ ဘယ်ဘာသာရပ်မဆို သင်ကိုယ်တိုင် လေ့လာ သင်ယူနိုင်သလို၊ အွန်လိုင်းပေါ်က လူမှုကွန်ယက်ကြီးနဲ့အတူလည်း လေ့လာနိုင်ပါတယ်။ ကမ္ဘာပေါ်မှာရှိသမျှ သင်ခန်းစာပို့ချမှုတွေကို သင့်အိမ်ကနေ အခမဲ့ လေ့လာနိုင်မှာဖြစ်သလို၊ သင်စိတ်ဝင်စားတဲ့ ဘာသာရပ်မှာ တကယ်ကို ကျွမ်းကျင်တတ်မြောက်အောင် သင်ယူနိုင်ပါတယ်။
ဒီဝက်ဗ်ဆိုဒ်ကလည်း ကမ္ဘာ့ ကောင်းဆုံးတက္ကသိုလ်တွေကနေ ပို့ချတဲ့ သင်ခန်းစာတွေပါဝင်တဲ့အတွက် သင့်အတွက် လေ့လာစရာတွေ အများအပြားရှိနေတဲ့ နေရာတစ်ခုပါပဲ။ ဒီဝက်ဗ်ဆိုဒ်ကို MIT နဲ့ ဟားဗတ်တက္ကသိုလ်တို့က ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ထားတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ ဒီဝက်ဗ်ဆိုဒ်မှာလည်း Coursera လိုပဲ သင်ယူစရာ သင်ခန်းစာတွေ ရာနဲ့ချီပြီး ရှိနေပါတယ်။
ဒီဝက်ဗ်ဆိုဒ်မှာတော့ သင့်အတွက် အလွန်အသုံးဝင်တဲ့ စာကြည့်တိုက်ပါရှိပြီး ဘယ်ဘာသာရပ်ကိုမဆို အပြန်အလှန် ဆက်သွယ်သင်ယူနိုင်ပါသေးတယ်။ ဗီဒီယို သင်ခန်းစာတွေနဲ့ သင်ယူနိုင်ယုံသာမက ပုံမှန်လေ့ကျင့်ခန်းတွေ၊ သင်ကိုယ်တိုင် လေ့လာခဲ့တဲ့ သင်ခန်းစာတွေကိုလည်း မှတ်သားထားနိုင်ပါတယ်။ သင်ခန်းစာ အသစ် သင်ယူဖို့အတွက်ရော သင်သိပြီးသား ဗဟုသုတတွေကို ဖြန့်ဝေဖို့အတွက်ရော နှစ်ခုလုံးအတွက် တကယ်ကိုအကျိုးရှိတဲ့နေရာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။
ဒီဝက်ဗ်ဆိုဒ်ကတော့ Coursera နဲ့ edX တို့လို ပညာရပ်ဆိုင်ရာ website မျိုးမဟုတ်ပါဘူး။ အွန်လိုင်းမှာ လက်တွေ့အသုံးကျမယ့်အရာတွေကို အဓိကထားဖော်ပြပေးတဲ့ website တစ်ခုပါ။ စီးပွားရေးအဆောက်အဦး တည်ဆောက်မှုနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ သင်ခန်းစာတွေမှအစ ဂစ်တာတီးသင်တဲ့ သင်ခန်းစာတွေအထိ ပါဝင်ပါတယ်။ နယ်ပယ်အသီးသီးက တကယ့် ပညာရှင်တွေရဲ့ သင်ခန်းစာတွေကို အခမဲ့ရော အခကြေးငွေနဲ့ပါ ဘာမဆို လေ့လာလို့ရတဲ့ အွန်လိုင်းစျေးကွက်တစ်ခုလို့ ပြောရင်တောင် ရပါတယ်။
ကျွမ်းကျင်ပညာရှင်တွေ၊ နာမည်ကြီးပုဂ္ဂိုလ်တွေ ဆီကသာမက လူသိမများသေးတဲ့လူတွေဆီကပါ ဘယ်ဘာသာရပ်ကိုမဆို သင်ယူချင်တယ်ဆိုရင်တော့ ဒီ website ကအကောင်းဆုံးပါပဲ။ အသုံးပြုသူတွေ ကိုယ်တိုင် မေးခွန်းတွေ အပြန်အလှန်ထုတ်၊ အပြန်အလှန်ဖြေနိုင်တဲ့ နေရာတစ်ခုလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အခြား website တွေနဲ့ မတူတဲ့အချက်တစ်ခုကတော့ အသုံးပြုသူရဲ့ ပရိုဖိုင်းဓာတ်ပုံဟာ အစစ်အမှန် ဖြစ်ရပါမယ်။ အမေးအဖြေတွေကိုတော့ သက်ဆိုင်ရာ အခြေအနေပေါ်မူတည်ပြီး အပြောင်းအလဲ လုပ်နိုင်ပါတယ်။
ကွန်ပျူတာ ပရိုဂရမ်ပညာရပ်ကိုမှ စိတ်ဝင်စားသူတွေအတွက်တော့ တစ်ခုတည်းသော အရေးပါတဲ့ website ကတော့ Stake Overflow ပါပဲ။ သင်ဟာ ပရိုဂရမ်သမားတစ်ယောက်ဖြစ်မယ် ဒါမှမဟုတ် ပရိုဂရမ်ပညာကို စိတ်ဝင်တစားနဲ့ လေ့လာနေတဲ့သူဆိုရင်တော့ ဒီ website ဟာ သင့်အတွက် အဖော်ကောင်းတစ်ယောက် ဖြစ်လာမှာအမှန်ပါပဲ။ အမေးအဖြေကဏ္ဍမှာဆိုရင် သင့်ကွန်ပျူတာ ပရိုဂရမ်နဲ့ပတ်သတ်လို့ အခက်အခဲတွေ သိချင်တာတွေအားလုံးကို မေးမြန်းနိုင်ပြီး၊ အခြားသူတွေရဲ့ အဖြေတွေကနေတဆင့် လေ့လာသင်ယူနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒီဝက်ဗ်ဆိုဒ်ဟာ HTML, CSS, PHP တို့လို ပရိုဂရမ်နဲ့ပတ်သတ်တဲ့ ဘာသာစကားတွေကို သင်ယူနိုင်မှာဖြစ်ပြီး Python (ကွန်ပျူတာ ပရိုဂရမ်ဆွဲသည့် language တစ်မျိုး) အတွက် လွယ်ကူပြီး၊ အပြန်အလှန်အကျိုးသက်ရောက်စေတဲ့ နည်းလမ်းတစ်ခု ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီထဲမှာဆိုရင် ပရိုဂရမ်ပညာရပ်ကို စစခြင်းသင်ယူနေသူတွေအတွက် စိတ်ဝင်စားစရာ ပျော်ရွှင်စရာ သင်ခန်းစာတွေ အများအပြားပါဝင်ပါတယ်။ ဘယ်လိုပဲ ဖြစ်ပါစေ ယခုမှ ပရိုဂရမ်ပညာကို စပြီး လေ့လာချင်သူတွေအတွက်တော့ သင့်တော်တဲ့ ဝက်ဗ်ဆိုဒ်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။
ဒီဝက်ဗ်ဆိုဒ်ကတော့ သင့်အတွက် ပရိုဂရမ်ပိုင်းရော၊ ကွန်ပျူတာသိပ္ပံနဲ့ ပတ်သတ်တဲ့ အပိုင်းမှာပါ လေ့လာလို့ ရနိုင်တဲ့ နေရာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ ဗဟုသုတရစရာ အသေးစိတ်အချက်အလက်တွေကိုပါ ထည့်သွင်းပေးထားတာမို့ Codecademy နဲ့တော့ မတူပါဘူး။ Codecademy ဝက်ဗ်ဆိုဒ် ကနေ အခြေခံအချက်အလက်တွေကို လေ့လာသင်ယူပြီး Tutorialspoint မှာတော့ အဆင့်မြင့် သင်ခန်းစာတွေကို လေ့လာသင်ယူနိုင်ပါတယ်။
ဒီနေရာမှာတော့ ပညာရပ်အစုံကို ခေါင်းစဉ်မျိုးစုံနဲ့ တစ်ဆင့်ပြီးတစ်ဆင့် သင်ယူလေ့လာနိုင်ပါတယ်။ ဒီဝက်ဗ်ဆိုဒ်ကို ကျွမ်းကျင်ပညာရှင်တွေက ခေါင်းစဉ်ခွဲတစ်ခုခြင်းစီအလိုက်ရေးသားပြီး အစားအသောက်နဲ့ ပတ်သတ်ပြီး ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာ ဗဟုသုတဖြစ်ဖွယ်ရာတွေလည်းပါဝင်ပါတယ်။
ဒီဝက်ဗ်ဆိုဒ်မှာလဲ သင်ယူချင်တဲ့အရာတွေ အများအပြားပါဝင်ပေမယ့် wiki လိုကိုယ်ပိုင်ပုံစံတော့ ရှိနေတတ်ပါတယ်။ ဒီဝက်ဗ်ဆိုဒ်ရဲ့ထူးခြားချက်ကတော့ eHow လို ဝန်ထမ်းတွေကိုယ်တိုင် သင်ကြားမှုတွေကို လမ်းညွှန်ပြုပြင်ပေးတာမျိုးမဟုတ်ပဲ၊ ဘယ်သူမဆို ဝင်ပြီး ရေးသားနိုင်၊ ပြုပြင်နိုင်သလို မလိုအပ်တာများ ကိုလည်း ပြန်ဖျက်နိုင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် သင်ဟာ သင်ယူသူ သက်သက်မဟုတ်ပဲ ကိုယ့်မှာရှိတဲ့ ဗဟုသုတတွေကိုပါ အခြားလူတွေကို ဝေမျှပေးနိုင်ပါတယ်။
သင့်အတွက် အကျိုးများစွာရှိနိုင်တဲ့ လေ့လာသင်ယူစရာတွေ အများအပြားရှိတဲ့ ဝက်ဗ်ဆိုဒ်တစ်ခုဖြစ်ပြီး သင့်အတွက် မြောက်များလှစွာသော သင်ခန်းစာတွေကို ဒီဝက်ဗ်ဆိုဒ်က ပံ့ပိုးပေးထားပါတယ်။ တစ်ခါမျှမပို့ချရသေးတဲ့ သင်ခန်းစာ အသစ်တွေကိုပါ ထည့်သွင်းပေးထားပါတယ်။ သေချာလေ့လာကြည့်လေ သင့်အတွက် သင်ခန်းစာတွေကို လေ့လာရန် အသင့်တော်ဆုံးနေရာတစ်ခု ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ အမှန်တရားကို သင်သိလာရမှာပါ။
ဒီ website ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကတော့ ကမ္ဘာ့အနှ့ံပျံ့နေတဲ့ အတွေးအခေါ်အယူအဆတွေကို ဒီနေရာကနေ တစုတစည်းတည်း ဖော်ပြပေးတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ နယ်ပယ်အသီးသီးက ကျွမ်းကျင်ပညာရှင်တွေဟာ သူတို့ဆွေးနွေးပြောပြလိုတဲ့ တင်ပြချက်တွေ၊ ယူဆချက်တွေ၊ အတွေ့အကြုံတွေကို ဒီနေရာကနေပြီး ရုပ်သံပို့ချချက်တွေနဲ့အတူ ဆွေးနွေးပြောပြပေးတဲ့ နေရာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီဆွေးနွေးပွဲတွေ မှတဆင့် သင့်ကိုယ်သင် အမြန်ဆုံးနဲ့ အလွယ်ကူဆုံး မိတ်ဆက်နိုင်တဲ့နေရာဖြစ်သလို အတွေးအခေါ်နဲ့ ထိုးထွင်းဉာဏ်တွေ ပွင့်လန်းလာနိုင်တဲ့ နေရာတစ်ခုလည်း ဖြစ်ပါတယ်။
စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ကိစ္စတွေဖြစ်တဲ့ မှတ်ဉာဏ်ဆိုင်ရာကိစ္စတွေ၊ အာရုံစူးစိုက်မှုနှင့် ဆိုင်သောကိစ္စတွေ၊ ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာနိုင်စွမ်းတွေ အတွက် များစွာအထောက်အကူပြုနိုင်တဲ့ ဝက်ဗ်ဆိုဒ်တစ်ခုပါ။ သင့်ဦးနှောက်ရဲ့ လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းရည်ကို ပျော်စရာကောင်းတဲ့ ဂိမ်းတွေကစားရင်း မြှင့်တင်နိုင်သလို၊ လေ့ကျင့်ရေး အစီအစဉ်တွေကလည်း သင့်ရဲ့လိုအပ်ချက်တွေ တိုးတက်မှုလမ်းကြောင်းတွေကို လေ့ကျင့်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ အစီအစဉ်တွေက သင့်ကို ထက်မြက်လာအောင်လုပ်ဆောင်ပေးမှာဖြစ်သလို၊ အနည်းငယ်လည်း စွဲလန်းမှုဖြစ်စေမှာပါ။
Lifehack.org မှ Nabin Paudyal ၏ 25 Websites Other Than Social Media To Upgrade Your Life ကို ကိုးကားဘာသာပြန်ဆိုထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်။
သင့်ဘဝကို တိုးတက်စေနိုင်သော ဝက်ဗ်ဆိုဒ် ပေါင်း ၂၅ ခု - အပိုင်း (၁)
သင့်ဘဝကို တိုးတက်စေနိုင်သော ဝက်ဗ်ဆိုဒ် ပေါင်း ၂၅ ခု - အပိုင်း (၂)
Permalink Reply by htaylim on January 8, 2016 at 12:17
Permalink Reply by Olive John on January 8, 2016 at 13:06
Thanks and it is really helpful for me.
Permalink Reply by Zin Aung on January 8, 2016 at 13:20
Permalink Reply by Ei Stone on January 8, 2016 at 15:10
Permalink Reply by aungzawoo on January 8, 2016 at 15:44
Permalink Reply by Aong Rine Sone on January 8, 2016 at 20:08
How nice is that! We can learn from on line. We can use our precious time usefully. Many thanks to the writer!
Permalink Reply by saw sa shee on January 8, 2016 at 22:26
Permalink Reply by Shinthant May on January 9, 2016 at 7:59
I think it must read.Thanksalot.
Permalink Reply by Hnin Hnin on January 11, 2016 at 6:08
Permalink Reply by myintmyintsoe on January 11, 2016 at 13:12
Permalink Reply by htaylim on January 12, 2016 at 10:19
Permalink Reply by Nan Htaik on January 12, 2016 at 14:08